Odeeffannoo: Mootummaan Abiyyi Ahmed maqaa Biyyi Misiraa sababa Hidha Laga Mormor nu loluuf jetti jedhuun dargaggoota abiddatti naquuf qophii gochaa jira. – Kichuu
Mootummaan Abiyyi Ahmed maqaa Biyyi Misiraa sababa Hidha Laga Mormor nu loluuf jetti jedhuun dargaggoota abiddatti naquuf qophii gochaa jira.
Beeksisa qacarrii magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti maxxansanii jiru. Raayyaa Ittisa biyyaa keessatti ogummaa injinarummaa fi IT isin barsiisna jedha beeksisichi. Barataan kutaa 10 fi 12 xumuree fi kooleejii fi yuunvarsitiirraa eebbifamee hijii dhabee jiru hunduu galmaa’uu akka danda’u waamicha goona jedhu. Ammas ilmaan Oromoo rakkisanii waan hojjetee jiraatu akka dhabu godhanii filannoo dhabee akka loltuu isaanii ta’ee lola isa hin ilaallannetti seenee akka irbaata allaattii ta’u gochuuf jiru.
Akkuma beekamu waraanni Bilxiginnaa kun diigamaadha. Yeroof mindaa nyaachuuf hunduu callisee taa’a malee osoo waraanni wayii eegalee namni lolu hin jiru. Abiyyi Ahmed ajajaa waraanaa ol-aanaa (commander In Chief) jedhama malee waraanni ajajamuufii hin jiru. Keessattuu ilmaan Tigiraay Abiyyi Ahmediif ajajamuu mannaa du’a filatu. Raayyaa Bilxiginnaa kana keessatti hunduu sabaan walqoqqoodeeti jira. Jal-deemtonni Abiyyi warri akka Biraanuu Juulaa ammoo “Mootummaan kun kan keessani; kan Oromooti” jedhanii ilmaan Oromoo Waraana Bilxginnaa keessa jiran gowwoomsuu barbaadu. Garuu namni irraa fudhatu hin jiru. Hunduu hanga inni bokoke dhowutti eeggataa jira. Harka wayyaa jalaan wal ijaaree guyyaa eegaa jira. Waraanichi osoo kanaan jiruuti muddamni biyya Misir kun dhufe. Abiyyi Ahmed waraana of harkaa qabu irraa abdii waan hin qabneef loltuu haaraa leenjisuuf murteeffatee hojii eegaleera. Kana duras loltoota biyyoota Eertiraa fi Faransaay irraa akka ergifatee jiru ni berkama.
Dhumarratti, dargaggoon Oromoo kamiyyuu raayyaa Impaayera Itoophiyaa kan uummata Oromoo waggaa 27 fixaa ba’ee ammas haala daran suukaneessaa ta’een itti fufee jiru kanatti seenanii akka du’a bilaashaa hin duune dhaamsa kooti. Yoo dandeesse WBO tti dabalamii diina kee injifadhuu biyya kee walaboimsi. Isa booda jireenya Bilisummaa fi qananii qabu jiraatta. Yoo Bilisummaa Oromoof wareegamtellee bara baraan seenaan si yaadata.
Eeyyeen nuti cululleedha Ati hoo eenyu jetti walaloon leta
Dubbiin Dubbii cululleeti warra Kijibaan biyya bulchuu fi warra saanii warra humnaan Biyya bulchuu san arraabuf humaa hin galan. Hundumaafuu walaloon leta Kenei Aagaa ergaa cimaa ufkeessaa qaba. Eeyyeen nuti Cululleedha isin hoo eenyu jedhamtu? #Walaloo #Leta_kenei #USA Daallaasitti sirna eebba kitaaba #Eenyu siin jedhu jedhurratti dhiheesse ture mee waliif dabarsaa jara girrisaa fi Culullee nuun jedhu biraan gahaa
ኦነግምም ባልደራስም ያላሉትን ከማንም በላይ ብልፅግና ስቀባበል ማየት ማለት የfakenews ባለቤቱ ብልፅግና መሆኑን በቀላሉ ማወቅ ይቻላል ።
ህግ ቢኖር ኖሮ በአዲሱ አዋጅ አዲስ አድማስ ጋዜጣ የውሸት ዜና በማሰራጨቱ ተጠያቂ ይሆን ነበር!
I’m sorry but the “accused #OLF to have secret links with #Shene” part took me out😂😂😂
So who & what is this “#Shene?”(if you know, you know🤣😜)
Ajaa’iba Rabbi😩🙄 https://t.co/4k2d8csDSr
— Fatuma Bedhaso (@FBedaso) March 8, 2020